Puntland oo ka hadashay Xeerka daabulka & ka ganacsiga Dadka (Dhagayso) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Puntland oo ka hadashay Xeerka daabulka & ka ganacsiga Dadka (Dhagayso)
Puntland oo ka hadashay Xeerka daabulka & ka ganacsiga Dadka (Dhagayso)
Garowe (HM):- Dowladda Puntland ayaa kadashay Xeerka Daabulka & kaganacsiga Dadka,waxaana munasabad arintan ku adan lagu qabtay Xarunta PDRC ee Garoowe,waxaana kasoo qaybgalay Madaxweyne kuxigeenka,Wasiiro,Xildhibaano,Hay,adaha Caalamiga ah ,Kuwa maxaliga ah & Bulshada rayidka ah ee Puntland.
Wasiirka Cadaaladda,Diinta & Arrimaha Dhaqancelinta Puntland Saalax Xabiib ayaa kahadlay xeerkan iyo marxaladihii uu soo maray,waxaa uu hoga tusaleyey sida ay muhiim u tahay jihaynta dhalinyarada & shaqo u helidda.
“Shaqo abuur in loo sameeyo dhalinyarada si aanay u aqbalin in la tahriibiyo ,madaama ay dhalinta wax soo baranaysaa aysan hore shaqo kahelin ,waxay u nuglanayaan hawada beenta ah ee loogu sheego in wadamo barwaaqo sooran ah la gaynayo,taasina ay keento in badaha ay ku dhintaan ayna la kulmaan khataro baxadleh oo ay kamidtahay kaganacsiga jirkooda,dil,badaha oo ay ku dhintaan”Wasiir Saalax Xabiib.
Wasiirku waxaa uu sheegay in Puntland ay ka go,antahay kahortagista tahriibinta,Daabulka & ka ganacsiga dadka ,gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed oo si fudud looga faaiidaysanayo,marka u danbaysana meel xun ku haligma.
Madaxweyne kuxigeenka Dowladda Puntland Eng,Cabdixakiin Xaaji Cumar ayaa ka hadlay xeerka Daabulka & kaganacsiga dadka ee Puntland ay ku howlantahay hirgelintiisa & diyarintiisa,waxaana uu sheegay in xeerkani yahay mid ku haboon marxaladd daabulka ee ka tagan dhulka Soomaalyeed.
Madaxweynekuxgeenku waxaa uu hay,adaha dowladda ee bahwadaagta ku ah xeerkan in ay gacan mugle ka gaysato sidii loo taabo gelin lahaa,waxaa kaloo uu xusay in dhibatada ka ganacsiga dadku ay noqotay mid soo badanaysa oo aanay dhalinyarada Soomaaliyeed ee badaha ku yacaysaa aanay ku bararugsanayn.
Eng,Camay waxaa uu hoosta ka xariiqay in howshani tahay mid balaran oo u bahan in la iska kaashado dowladgoboleedyada & dowladda Faderalka Soomaaliyeed,waxaa kaloo uu xusay in ay jiraan in Hay,ado Caalami ah & kuwo maxali ahi ay jogaan dalka kusoo aan ummada u hayn howlihii ay markii hore ay inoo sheegteen si arintaan loo xaqiijyana ay u bahantahay in la xisaabtan dhab ah lagu sameeyo.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland waxaa uu bulshada Puntland ka codsaday in aanay gadaasha marsan qofka waxyeelayna nabadgelyada & horumarka kale ee socda,taasi oo uu shaaca ka qaaday in ay marar badan ay dhacday.